क्यानसरबाट जोगाउँछ मकैले ! हेर्नुस मकै खानुका फाइदाहरु - krishipost.com
क्यानसरबाट जोगाउँछ मकैले ! हेर्नुस मकै खानुका फाइदाहरु
एक सिजनमा मात्रै हाेइन आजभोलि मकै वर्षै भरि पाउन सकिन्छ । सुकेको मैक भुटेर खान सकिन्छ । मकैमा शरीरको पोषणका लागि आवश्यक सबै प्रकारको मिनरल्स पाइन्छ । मकै यस्तो खाद्य पदार्थ हो जसले मानिसको स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पु¥याउछ ।
मकैमा भिटामिन सी, बायोफ्लेविनाइड्स, क्यारोटेनाइड र फाइबरको मात्रा धेरै पाइन्छ । यसले कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर धमनीहरु ब्लक हुनबाट रोक्छ । यसमा पाइने फाइबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रित गर्न सहायक गर्दछ ।